Baarlamaanka Itoobiya oo maanta dib u furmaya. - Hargeele - Wararka Somali State
October 7, 2019 106
Kulanka Baarlamaanka ee labada aqal, kana sare iyo ka hoose ee loo kala yaqaano aqalka wakiilada iyo golaha federeyshanka ayaa manta kulan wada jir ah dib uga furmaya magaalada Addis Ababa.
Kulankan ayaa waxaa khudabd ku ku furi doomnta madaxweynaha Itoobiya marwo Sahle-Work Zewde, waxaaney madax weynaha laga filaya ain ay khudabadeeda kaa hadasho qorshaha dawlada ee sanadkan 2012 EC ( 2019/20).
Sida laga soo xigtey Dr Misrak Mekonnen, oo ah gudoomiyaha golaha wakiilada, waxaa kulanka manta lagu marti qaadey diblamaasiyiin iyo martisharaf kale si ay uga qayb qaataan kulanka maanta.
Kooxaha Chelsea iyo Manchester City oo ku dagaalamaya saxiixa xiddig ka tirsan Leicester City
Wafdi ka socdey xafiiska biyaha DDS oo booqdey biyo xidheen ku yaala degmada Afdam.
Halkee ayuu marayaa mashruuca dhismaha wadooyinka MM Jigjiga?
Hogaaminta sare ee Xisbiga barwaaqo ayuu tababar uga furmay magaalada Adaama.